Kushomeka kweMari Kworamba Kuchiwedzera Munyika
Vanhu vakawanda munyika vanonzi vave kuedza kutora mari dzavo kubva kumabhanga.
Mukuyeddza kupedza dambudziko iri, gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe VaJohn Mangudya vakati bhanga ravo richaparura mari yemabond notes.
Asi izvi zvinonzi zvakapa vanhu kuti vaite chipata pata kunotora mari kumabhanga vachityira kuti madhora avo ekuAmerica aizoshaya simba sezvakamboitika muna 2007 apo pakaparurwa mari dzema bearer cheques neRBZ.
Kushomeka kwemari uku kuonziwo kwatuma vemabhanga kuderedza mari dzinokwanisa kutorwa nemunhu kana makambani pazuva.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi, VaProsper Chitambara, avo vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, vanoti dambudziko iri richatonyanya sezvo vanhu vave kutora mari dzavo kubva kumabhanga nenyaya yekusaziva zviri kuitika munyaya dzezvemari.
“Iye zvino mabhanga akaderedza mari dzinotorwa pamaATM, vamwe vave kupa ma$100.00, vamwe ma$200.00 vamwewo ma$300.00 zvichingodaro. Zvinhu zvichatonyanya kuoma,” VaChitambara vanodaro.
Vanoti vanhu vakatanga kusagadzikana pakabuda mashoko ekuti hurumende iri kuda kuisa munyika mari yema bond notes, iyo inonzi neveruzhinji inzira yehurumende yekuda kudzora nayo ma bearer check.
VaChitambara vanoti dambudziko rekushaikwa kwemari iri rave kukanganisawo hurongwa hwevemakambani nevamwe vanenge vachida kuburitsa mari kunze kwenyika vachitenga kana kubhadhara zvinhu zvavanenge vatenga.
Zvimwe zvinonzi zvave kukanganiswa hurongwa hwekutumirwa kwemari nenharembozha hunotungamirwa nemakambani enharembozha sezvo vanhu vari kunzi vave kushaya mari munzvimbo dzavanofanirwa kutorera mari idzi.
Vachitambara vanotiwo havaoni dambudziko rekushaikwa kwemari richikasika kugadziriswa sezvo nyika isina chairi kugadzira chekutengesa kunze.
“Dambudziko ndere kuti nyika haina zvairi kugadzira zvekutengesa kunze saka vanhu vacharamba vachitambura. Imwe nyaya ndeyekuti mari dziri kuburitswa munyika zvisina tsarukano,” VaChitambara vanowedzera.